निरोगी रहन आफ्नो आनीबानी सामान्य बदल्नुहोस् – mYKantipur.Com
२०७५, २४ असार आईतवार ११:१५
हामीलाई अहिले सबैभन्दा बढी केको चिन्ता छ ? धनसम्पतिको । पैसाको । करियरको । हामी चाहन्छौं, पर्याप्त आम्दानी होस् । राम्रो जागिर होस् । समाजमा प्रतिष्ठा होस् । मान-सम्मान होस् । सुख-सयालसँग जीवन विताउन पाइयोस् । अभाव र दुख नहोस् ।
तर, पैसा आर्जन गरेर, सुख-सयल भोग गरेर हाम्रो चिन्ता हरण हुन्छ त ? पक्कै हुँदैन । त्यसो हुँदो हो त, संसारका धनाड्यहरु सबैभन्दा सुखी हुनुपर्ने हो । उनीहरु हरक्षण रमाउनुपर्ने हो । पर्याप्त धनदौलत भएर पनि, सुख सयल भएर पनि मान्छे रमाउन सक्दैन । किन ?
हामी किन मानसिक र शारीरिक रोगले ग्रस्त ?
’cause उनीहरु मानसिक वा शारीरिक रुपमा कुनै न कुनै समस्या झेलिरहेका हुन्छन् । मानसिक तनाव, दवावले मानिसलाई जतिसुकै सुविधामा पनि खुसी रहन दिदैन । अहिले संसारका मानिसहरु कुनै न कुनै रुपले मानसिक समस्यामा छन् । उनीहरुसँग पूख्र्यौली ज्यायजेथा भएर पनि, मनग्ये आम्दानी भएर पनि, मानप्रतिष्ठा भएर पनि सुख छैन । चैन छैन । आनन्द छैन । हर्ष छैन ।
अहिले हामी जसरी हुन्छ धनदौलत जोड्ने चक्करमा छौं । पैसा कमाउने अनेक यत्नमै हाम्रो दिन वित्दो छ । बिहान उठेदेखि हामी पैसा सोच्छौं । र, राती ओछ्यानमा ढल्किएर सुत्नुअघि पनि पैसा नै सोच्छौं । यसरी पैसा वा धन कमाउने चक्करमा लिप्त भएर हामी आफैलाई बिर्सिरहेका छौं । कतिबेला खाने, के खाने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको हेक्का हुँदैन । बिहान मर्निङवाक गर्नुभन्दा हामीलाई घरजग्गा खरिद-बिक्रीको कुरा गर्नु बढी फलदायी लाग्छ ।
धनदौलतले सुख मिल्दैन
हामीले अर्थशास्त्रमा पढेका छौं कि, खर्च व्यवस्थापन गर्दा प्राथमिकताको आधारमा खर्चको विवरण तयार गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो ? त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । क्रमस कम प्राथमिकताका विषयलाई समेट्दै जानुपर्छ ।
ठीक यसैगरी शारीरिक आवश्यक्तालाई पनि हामीले प्राथमिकताको आधारमा समय दिनु वा महत्व दिनुपर्छ । यसको सोझो अर्थ के भने, शरीर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । शरीरभन्दा धनदौलत, भौतिक सुविधा ठूलो हुँदै होइन । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । तर, हामी आफ्नै शरीरलाई कतिपनि माया गर्दैनौं । कतिपनि महत्व दिदैनौं ।
त्यही कारण त जब हामी हुनेखाने हुन्छौं । घरसम्पतिका मालिक हुन्छौं । शरीर ति सबै सुविधा भोग गर्न तयार हुँदैन । शरीर यी सुख-सयलभन्दा टाढै रहन खोज्छ । न अमिलोपिरो खान हुन्छ । न आरमदायक ढंगले बस्न हुन्छ ।
खासमा हामीले शरीरका लागि धेरै समय दिनु पर्नेपनि होइन । बिहान दुई घण्टा आफ्नो लागि छुट्याए मनग्ये हुन्छ । बिहान उठेपछि पानी पिउन, शौच क्रिया गर्न, योग-ध्यान गर्न, व्यायाम गर्न, नास्ता खान, नुहाइधुवाई गर्न यत्तिका समय पर्याप्त छ । तर, शरीरप्रति हामी कति अनुदार छौं भने दिनभरमा नाथे दुई घण्टा समय पनि यसका लागि छुट्याउँदैनौं ।
दिनभर जे जति काम गर्छौं, त्यसमा पनि शरीरका लागि केही सोच्न सकिन्छ । समय मिलाएर पानी पिइरहने । बेलाबेलामा केही खाइरहने । एकै ठाउँ बस्ने नभई यताउता हिँडडुल गरिरहने वा शारीरिक रुपमा सक्रिय रहने । ख्यालठट्टा गर्ने । प्रशन्न रहने । यसबीचमा पनि लामो-लामो सास लिने । मौका मिले कपालभाती गर्ने । अझ मौका मिले केही क्षण ध्यान मुद्रामा बस्ने । दिनभरमा यति गर्न सकियो भने, पक्कैपनि तपाईं/हाम्रो शरीर निरोगी हुन्छ ।
२०७५ असार २४ गते १०:४९ मा प्रकाशित